Portal Student AAUA www.aaua.edu.ng/b/student/ Mmelite Ngwa: Akụkọ Newslọ Akwụkwọ Ugbu a
AAUA Portal Student www.aaua.edu.ng/b/student/ Mmelite Ngwa Ọhụrụ
gbara akwụkwọ Akwụkwọ Akụkọ ụlọ akwụkwọ by Nhazi ederede TMLT na June 18, 2021
AAUA Portal Student: Ikike nke Mahadum Adekunle Ajasin enyerela nwa akwụkwọ ahụ aka. Ọnụ ụzọ a bụ ime ka ọrụ ụmụ akwụkwọ dịkwuo mfe. AAUA bụ gọọmentị steeti nwere ma na-arụ ọrụ na mahadum Naijiria.
Agbanyeghị, gaa n'ihu na-agụ isiokwu a ka ịmatakwu. Na mbu, gini ka imara banyere mahadum Adekunle Ajasin (AAUA)?
Ọzọkwa, mahadum dị na Akungba Akoko, Ondo State, Nigeria. Ọzọkwa, ha nwere ọnụ ụzọ ebe ụmụ akwụkwọ na ndị ọha na eze nwere ike ịmụtakwu banyere ụlọ akwụkwọ ahụ.
E guzobere Mahadum Adekunle Ajasin (AAUA) dị ka Obafemi Awolowo University na Machị 1982 site na gọọmentị nke Ondo State ochie, nke Onye Isi Chief Chief. Michael Adekunle Ajasin.
Agbanyeghị, gọọmentị na-anọchi anya Navy Commodore nke nọchiri ozugbo Michael Bamidele Otiko gbanwere aha ya na Mahadum Ondo State na 1985. Mbugharị ya na Akungba Akoko na Ondo ọhụrụ wee bụrụ ihe dị mkpa na 1999.
Gọọmenti na-akwado mbugharị ahụ bịanyere aka na iwu site n'aka Gọvanọ nke Steti ahụ n'oge ahụ, Chief Adebayo Adefarati, na November 1999. Nke a kpaliri ngagharị nke otu ndị ọrụ si na saịtị ochie na Ado-Ekitito Akungba Akoko na 1 Disemba 1999.
Mkpa nke Portal Student AAUA
Nwa akwukwo AAUA portal emere maka ndi ochie na ndi n’acho akwukwo nke Mahadum. Ọzọkwa, ọ bụ iji mepụta akaụntụ ma ọ bụ banye iji rụọ ọrụ agụmakwụkwọ ụfọdụ dị mfe. Ihe Nlereanya:
Ikwu ugwo ulo akwukwo.
Ọzọkwa, ịlele nsonaazụ.
Ọzọkwa, itinye akwụkwọ anamachọihe.
Ọzọkwa, ịlele ihe ndị a chọrọ.
Ọzọkwa, ịlele oge mmemme.
Na mgbakwunye, nbudata akwụkwọ ozi ntinye na otu ị ga - esi gbakọọ isi gị (GP & CGPA), yana mmemme metụtara agụmakwụkwọ ndị ọzọ.
AAUA Portal Student
Maka nwa akwukwo AAUA maka umu akwukwo (UTME / DE ụmụ akwụkwọ) nnabata usoro ịkwụ ụgwọ usoro ị nwere ike ịga http://eportal.aaua.edu.ng/frontend/.
Ọzọkwa, maka ọnụ ụzọ ụmụ akwụkwọ AAUA maka usoro ndebanye aha na ịkwụ ụgwọ nnabata nnabata ị nwere ike ịga http://eportal.aaua.edu.ng/frontend/
AAUA Portal Student for Registration Usoro na ịkwụ ụgwọ nke nnabata ụgwọ
Gị http://eportal.aaua.edu.ng/frontend/.Na-aga Ndenye Links-> Mbanye Status-> Lelee nnabata Ọnọdụ.
Agbanyeghị, maka nwa akwukwo ọhụụ na enweghị akaụntụ, pịa njikọ "Mepụta akaụntụ".
Ọzọkwa, tinye nọmba ndebanye aha gị nke UTME iji nyochaa na ị kwụrụ ma kwenye ụgwọ nnabata gị. Agbanyeghị, maka ndị na-akwadoghị ụgwọ nnabata ha, pịa njikọ “nkwenye ịkwụ ụgwọ”.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na nyocha na (ii) dị n'elu ga-aga nke ọma, a ga-akpọrọ gị na peeji nke okike iji mepụta akaụntụ gị.
Ọzọkwa, jupụta ụdị okike akaụntụ ahụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị ma nyefee. Nbanye gị nzere ga-eziga na ekwentị gị na adreesị ozi-e ozugbo. Ga-ahụ ga-eduzi na nbanye na peeji nke ịnọgide na aha gị.
Jiri nọmba ekwentị gị na adreesị ozi-e gị. Dika ndi a gha abu uzo nke igwa gi okwu na oge gi no na Mahadum.
Ọzọkwa, banye na aha njirimara na paswọọdụ gị iji malite ndebanye aha gị.
A na-achịkọta ụdị Data ahụ na ngalaba ise (5). Biko jupụta nlezianya na n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Enwere akwụkwọ ndị dị mkpa maka bulite iji mezue ndebanye aha gị. Ha bụ: Akwụkwọ ọmụmụ, asambodo onye si, nnabata ụlọ ikpe (Nhọrọ) na akwụkwọ akaebe.
Ọzọkwa, leta nnabata JAMB (nhọrọ), paspọtụ na nsonaazụ O'level (s). Ndị chọrọ itinye aka na ntinye na mgbakwunye, chọrọ ka ha bulite nsonaazụ ND / NCE / IJMB ha. Agbanyeghị, ekwesiri ka enyocha ha niile na usoro JPEG.
Ndi umu akwukwo n’enweghi akwukwo ntinye nke JAMB kwesiri ikwuputa na ulo akwukwo ndi nnabata Mahadum.
Mgbe ịmechara ndebanye aha, rịba ama. Biko jiri nlezianya gafee fọm ndị ọzọ tupu ị pịa “Emechaa nrubeisi”.
Pịa na “Mechaa nrubeisi” iji mezue ma tinye ndebanye aha gị. A preview ma ọ bụ akụkọ na peeji nke ga-egosipụta.
Bipụta ihu ihu akwụkwọ ma lelee okwu nyocha n'okpuru ebipụta.
Studentsmụ akwụkwọ ndị gafere nyocha nwere ike ịga ụlọ akụ maka ịkwụ ụgwọ ụgwọ ụlọ akwụkwọ.
ego etranzact maka ugwo ulo akwukwo nke enyere site na ulo oba di nkpa. A ga-eji ya maka nkwenye ịkwụ ụgwọ ụgwọ ụlọ akwụkwọ yana ndebanye aha na ntinye.
A ga-ezigara ajụjụ na mkpesa ọ bụla ọzọ [email protected] Ma ọ bụ, kọọrọ anyị sistemu tiketi anyị na http://eportal.aaua.edu.ng/ughelpdesk/
AAUA Portal Student for Undergraduate (UTME / De Students) Acgwọ Nkwenye esgwọ Progwọ
Lelee Ọnọdụ nnabata gị site na ịpị bọtịnụ Ọnọdụ nnabata na peeji nke ụzọ mbata. OR na Portal ọdịda page aaua.edu.ng. Na-aga Ndenye Links-> Mbanye Status-> Lelee nnabata Ọnọdụ
Ọzọkwa, nyefee Nọmba Ndebanye aha gị UTME / DE wee pịa bọtịnụ Nyefee. Agbanyeghị, ọ bụrụ na enyere gị nnabata, a ga-egosipụta windo popup yana ozi ekele.
Ọzọkwa, gaa na ụlọ akụ ọ bụla na mba gị nọ gị nso. Nweta onye na-ere ahịa ma jupụta onye na-agwa ya dị ka a gwara ya na Nzọụkwụ 2 n'elu.
Ọzọkwa, gwa onye na-ahụ ego ma ọ bụ onye na-ere ego na ịchọrọ ịkwụ ụgwọ maka Mahadum Adekunle Ajasin, Akungba Acceptance fees na eTranzact Platform.
Ọzọkwa, mgbe ịkwụ ụgwọ, jide n'aka na ị na-eche ma nakọta gị eTranzact Payment Receipt. Nke a dị mkpa dịka ọ bụ ohere ịnweta obibi akwụkwọ ozi nnabata gị.
Mgbe ị natara akwụkwọ azụmahịa eTranzact, rịba ama. Gaa na ntanetị ọzọ ma gosi ụgwọ ịkwụ ụgwọ ego ị kwụrụ n'ụlọ akụ. Nke a dị mkpa iji hụ na ị bụ ezigbo onye nwe eTranzact Payment Receipt.
Agbanyeghị, iji kwenye nnabata ahụ, pịa Ndenye Links-> ceptkwụ eegwọ -gwọ-> Kwenye ụgwọ nnabata.
Ọzọkwa, na peeji Nkwenye ego nnabata, rịba ama. Ga-eweta gị Ndebanye aha UTME / DE Number na Nkwenye Order Number na gị eTranzact mentkwụ Regwọ Nnata ị nwetara site akụ. Wee pịa bọtịnụ ntinye iji kwado ụgwọ ịkwụ ụgwọ gị.
Ọzọkwa, ozugbo ihe ịga nke ọma, mara. A ga-ebugharị gị gaa na peeji ebe ị ga-enwe ike ibipụta akwụkwọ ozi nnabata gị.
Na peeji nke nnabata, nyefee UTME / DE Ndebanye aha gị. Na pịa Nyefee iji lelee ma bipụta gị Akwụkwọ Ozi Adị Mbanye
Etu ị ga - esi tinye Ọrụ Email AAUA
Ọ bụ iwu na ụmụ akwụkwọ niile kwesịrị iji ozi email nke a ga-enye ha mgbe emume mmakọ ahụ gasịrị. The usoro nke adreesị ozi-e nyere dị ka nwata akwukwo Ee e@ aaua.edu.ng dịka ọmụmaatụ; [email protected].
Mgbe ịmechara akara, a ga-ekenye ụmụ akwụkwọ ndị natara akara nọmba ha dị n'elu nke adreesị ozi-e gọọmentị. (Mara: - Email email a dị iche na email emere na usoro ndebanye data bio-data)
Ọzọkwa, ụmụ akwụkwọ ga-abanye na www.mail.aaua.edu.ng wee pịnye aha njirimara ha ntụgharị nwata akwukwo [email protected] soro paswọọdụ ndabara nke a ga-ezigara nọmba ekwentị ụmụ akwụkwọ site na SMS.
Ọzọkwa, mgbe nbanye, a ga-achọ ka ị gbanwee paswọọdụ ndabara na paswọọdụ nkeonwe.
NB: A ga-eji email gọọmentị mee ihe n'oge ụmụ akwụkwọ nọrọ na kampos ruo ngụsị akwụkwọ. A ga-ejikwa ya maka ọrụ klaasị na ebumnuche agụmakwụkwọ ndị ọzọ dị mkpa.
Etu ị ga-esi nweta Portal Helpdesk nke AAUA Student
Biko gụọ usoro ndị a iji jiri AAUA Helpdesk: Gaa www.aaua.freshdesk.com wee pịa Banye.
Ọzọ bụ pịa 'nbanye iji google'.
Ọzọkwa, tinye adreesị ozi-e gọọmentị nke enyerela gị maka gị [email protected] dị ka aha njirimara gị na Paswọdu gị. (Mara: - needkwesighi ịdebanye)
Na mgbakwunye, gbakwunye ma nyefee tiketi ọhụrụ; ikwupụta arịrịọ / mkpesa gị (Onye nchịkwa na ICTAC AAUA ga-aza arịrịọ gị n'oge na-adịghị anya).
Ọzọkwa, gaa na www.mail.aaua.edu.ng ma banye na email gị. Nke ahụ bụ gị Matric No ma ọ bụ [email protected] dị ka aha njirimara gị na Paswọdu gị.
Mgbe ahụ, lelee igbe mbata gị iji chọta akara njikọ nkwado tiketi ka ị soro wee mara ọkwa nke tiketi ị depụtara na mbụ
Ozugbo emere ọgwụgwọ gị, ị ga-enweta ozi na nzaghachi na mmetụta ahụ.
Ikwesighi ileta ICTAC AAUA belụsọ na onye nchịkwa kwuru na nzaghachi na tiketi gị. Ọzọkwa, ụmụ akwụkwọ ndị debanyere aha ma ọ bụ banye na adreesị ozi-e ọ bụla ma e wezụga adreesị ozi-e AAUA enyere ha ga-atụfu).
Graduategwọ esgwọ Schoolgwọ Schoollọ Akwụkwọ na-akwụghị ụgwọ (ụmụ akwụkwọ na-alọghachi)
Studentsmụ akwụkwọ niile na-alọghachite ga-ele ma bipụta akwụkwọ ọnụahịa akwụ ụgwọ ụlọ akwụkwọ ha iji mara ego ole ha na-akwụ yana otu esi mejupụta onye na-ekwu okwu ma kwụọ ụgwọ na akụ.
Iji lelee / bipụta akwụkwọ ọnụego ịkwụ ụgwọ ụgwọ akwụkwọ, na peeji nke ụzọ mbata, gaa na Ndenye Njikọ-> Bipute Akwụkwọ Fegwọ Schoolgwọ Akwụkwọ-> Bipute Akwụkwọ Fegwọ Schoolgwọ Akwụkwọ
Agbanyeghị, na Mbipụta Akwụkwọ esgwọ Ingwọ Akwụkwọ, nyefee nọmba Matric gị. Ọ bụrụ na achọtara na ntọala ịkwụ ụgwọ ụgwọ ụlọ akwụkwọ, mgbe ahụ a gosipụtara akwụkwọ ọnụego ụgwọ akwụkwọ maka ikiri na ibi akwụkwọ. Ọ bụrụ na achọtaghị ya, ọ pụtara na ị gaghị akwụ ụgwọ n'ụlọ akụ.
Ọzọkwa, biko kpọtụrụ ngalaba ICTAC nke ụlọ ọrụ ahụ ma denye mkpesa gị. N'okwu a, anyị ga-achọ ịhụ gị n'onwe gị iji dozie esemokwu ahụ ma ị ga-enwe ike ịlele akwụkwọ ọnụahịa gị wee kwụọ ụgwọ ụlọ akwụkwọ.
Gaa na ụlọ akụ ọ bụla na mba gị ka gị nso. Nweta onye na-ere ahịa ma jupụta onye na-ekwu ihe ahụ dịka akọwapụtara ya na Nzọụkwụ 2 n'elu.
Ọzọkwa, gwa onye na-ahụ ego ma ọ bụ onye na-ere ego na ịchọrọ ịkwụ ụgwọ maka Mahadum Adekunle Ajasin, ,gwọ Schoollọ Akwụkwọ Akungba na eTranzact Platform. Mgbe ịkwụ ụgwọ, jide n'aka na ị chere ma nakọta gị ETranzact Payment Receipt.
Njikọ ndị metụtara:
Kedu ka m ga - esi tinye akwụkwọ maka nnabata mbufe Mmụta
Portal University Madonna
Portal Student LASU
Mahadum University nke Havard
Mahadum Federal University Oye Ekiti Portal
Undergraduate Fegwọ Schoolgwọ Schoollọ Akwụkwọ nke graduatelọ Akwụkwọ (Ndaghachi ụmụ akwụkwọ): Nzọụkwụ ndị ọzọ
Mgbe ị natara akwụkwọ eTranzact nke ịkwụ ụgwọ gị, gaa na ntanetị ọzọ ma kwenye na ịkwụ ụgwọ ụgwọ ụlọ akwụkwọ ị megoro n'ụlọ akụ. Agbanyeghị, iji kwenye ụgwọ ụlọ akwụkwọ, pịa Ndenye Links-> Paygwọ Schoolgwọ Schoollọ akwụkwọ-> Gosi ụgwọ Schoollọ akwụkwọ.
Ọzọkwa, na peeji nke akwụkwọ ụgwọ ụgwọ akwụkwọ, Nye Nọmba Matric gị na Nọmba Iwu Nkwenye na akwụkwọ nkwụnye ego gị eTranzact ị nwetara site na ụlọ akụ wee pịa bọtịnụ Nyefee iji kwado ụgwọ ịkwụ ụgwọ ụlọ akwụkwọ gị.
Ọzọkwa, ozugbo ọma, ị ga-ibugharị na peeji nke ebe ị ga-enwe ike nbanye na akaụntụ gị.
Na nbanye na akaụntụ gị, ọ bụrụ na ị mepụta akaụntụ tupu, banye na aha njirimara na paswọọdụ gị mana ịnweghị akaụntụ tupu, pịa njikọ "Mepụta akaụntụ".
Ọzọkwa, nyochaa ga-akwụ ụgwọ ụgwọ ụlọ akwụkwọ. Nye gị Matric Number na pịa Nyefee bọtịnụ.
Ọ bụrụ na ị kwadoro ụgwọ ụgwọ ụlọ akwụkwọ gị tupu oge ahụ, a ga-ahapụ gị ka ịmepụta Akaụntụ na SMS nke nzere nbanye gị. Biko hụ na n'oge akaụntụ e kere eke, ị na-enye na-arụ ọrụ mobile set nọmba na adreesị ozi-e.
Banye na akaụntụ gị na aha njirimara na paswọọdụ gị ma jupụta ụdị niile dị mkpa dị ka o kwesiri ma nyefee.
Ihe edere n'elu ga-enyere gị aka ịnweta AAUA Portal Student. Gbaa mbọ hụ na gị na ndị enyi kerịta.
Hụ Usoro maka azụta ụgbọ ala Belgium site na Cotonou na 2020
Orrix Reatly & Nchịkọta Mbanye 2017 | Etu esi etinye akwụkwọ maka Orrix Reatly & Construction recrutment
Médecins Sans Frontières Job Portal 2020 | www.association.msf.org
EKSU Oge ntinye oge 2016/17, ntozu aha na ndebanye aha
Mkpokọta Otu Ntugharị Mbụ 2017 | Ntuziaka Ngwa na Nchọpụta
Ndị na-ahụ maka nchịkwa ndị na-ahụ maka nchịkwa nke ndị na-ahụ maka nchịkwa na njikwa na njikwa njikwa
Ọnọdụ nnabata JAMB 2021 Portal maka Direct Checkcking nyeere
Tags: aaua student portal, aaua student portal for undergraduate, otu esi ewepu umu akwukwo aaua, mkpa nke ụmụ akwụkwọ aaua
« PricewaterhouseCooper Mbanye maka Isi, Ndepụta Business 2021
Tinye Ugbu a Maka Mbanye na-aga n'ihu na PricewaterhouseCooper (PwC) 2021 Mmelite »